The Ab Presents Nepal » पानीजहाजमा रोजगारी दिने भन्दै ३०० युवाबाट ६ करोड ठग्ने पौडेल पक्राउ!
पानीजहाजमा रोजगारी दिने भन्दै ३०० युवाबाट ६ करोड ठग्ने पौडेल पक्राउ!
काठमाडौं -: सिंगापुर लगेर पानीजहाजमा जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर तीन सय युवासँग ६ करोड ठग्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नुवाकोट गणेशस्थान–९ का ३४ वर्षीय प्रवीण पौडेललाई महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएको टोलीले हेटौँडाबाट पक्राउ गरेको हो ।
भारतीय जहाजका क्रु मेम्बरलाई तालिम दिने कम्पनीसँग सम्झौता समेत गरेका थिए । सिंगापुर जान तयार भएका युवालाई उनी त्यहीँ लैजान्थे । यसरी ठगिएका ५८ जना सम्पर्कमा आइसकेको अनुसन्धानमा खटिएका महाशाखाका एसपी सुशीलसिंह राठौरले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।